I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 15.0.1 | Izindaba ze-IPhone
U-Ignacio Sala | 20/10/2021 10:00 | iOS 15
I-Apple iyeke ukusayina ukukhishwa komphakathi kokuqala kwe-iOS 15 ekuqaleni kuka-Okthoba. Ezinsukwini ezingama-20 kamuva, inkampani esekwe eCupertino vele uyeke ukusayina i-iOS 15.0.1, okusho ukuthi abasebenzisi abathuthukise amadivayisi abo baba yi-iOS 15.0.2 noma i-iOS 15.1 abasakwazi ukwehlela ku-iOS 15.0.1.
IOS 15.0.1 ikhishwe kubasebenzisi ngo-Okthoba 1 ukulungisa iphutha elalivimbela abasebenzisi kusuka vula amamodeli we-iPhone 13 usebenzisa i- Umsebenzi wokubuka we-Apple Watch. Kepha bekungeyona kuphela inkinga ebhekane nabasebenzisi bokuqala ukuyibuyekeza ku-iOS 15.0.
Iphinde yalungisa inkinga ebangele ukuthi uhlelo lokusebenza lwe-Izilungiselelo lukhombise ngokungalungile lokho isitoreji sedivayisi besigcwele. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, i-Apple yakhipha i-iOS 15.0.2 ngokulungiswa kwamaphutha okuningi.
Njengamanje, i-Apple ibihlola i-iOS 15.1 amasonto ambalwa, inguqulo okwamanje ikunombolo ye-beta 4, inguqulo ezokwengeza umsebenzi we-SharePlay ne-ProRes video codec yabasebenzisi be-iPhone 13 Pro ne-iPhone 13 Pro Max.
IOS 15.1 izokhishwa ngo-Okthoba 25, kanye nenguqulo yokugcina ye-macOS Monterey, yize iqinisekiswe yi-Apple ekuqaleni kuka-Agasti, Ukusebenza kwe-SharePlay ngeke kutholakale kuze kube ukuwa.
Kwenzeka okufanayo ngomsebenzi we-Universal Control, isici esizophinde singatholakali ngokwethulwa kweMacOS Monterey.
Izinhlobo zangaphambilini azisakwazi ukufakwa
Ukubuyela ku-iOS yakudala kwakha ukuphela kwesixazululo abasebenzisi abanaso lapho ngemuva kokubuyekeza, ukuphela kwabo kuqala ukungasebenzi njengoba kufanele. Uma uphakathi kwalaba basebenzisi, futhi awuzange wehlise izinga ngaleso sikhathi, ukuphela kwento ongayenza manje linda ukukhishwa kwe-iOS 15.1.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 15.0.1
Indwangu yokuhlanza i-Apple ishaya kakhulu! Ukulethwa okusondele kakhulu ngoDisemba
I-Podcast 13x08: I-MacBook Pro entsha, i-HomePod nama-Airpods